Akara - RayHaber
HomeRayHaber - newsgbọ okporo ígwè na ọsọmkpado
Decession / Grantee
Editor na Chief / Editor na Chief
Ndị editọ / editọ
Ndụmọdụ Ndụmọdụ / Jurisconsult
Onye na-enye ndụmọdụ ego / onye ndụmọdụ ego
Kpọtụrụ Necdet ozugbo
Kpọtụrụ na Ozi Adreesị / Kpọtụrụ na Ozi Adresị
Ikpe ziri ezi Mah. Anadolu Cad. Megapol Tower 41 / 81
Bochum na Nchedo
Kwa afọ, elu-ọsọ okporo ígwè oru, Turkey bụ a wee na-eto eto ịghọ onye ndú na Europe. Ntughari na ugbo okporo ụzọ, nke na-agba ọsọ a na-agba ọsọ ụgbọ elu, nọgidere na-abawanye. Na mgbakwunye na ntinye ego e mere n'obodo ahụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ ụlọ anyị na-enwu gbaa. Ọ dị mpako ịmalite ịmepụta ụgbọ okporo ígwè Turkish nke dị n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na mpaghara ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ ọkụ na ndị na-ere ụgbọ ala. Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịnọ na tebụl mpako a.
7 nọ na-arụ ọrụ na usoro mgbasa ozi na-adịghị achọ ọdịmma onwe ya ọtọ iji mee ka ịkọ akụkọ mpaghara. Site na website Ray`ber anyị aghọwo nnukwu akụkọ ozi ọma nke na-enweta ihe dịka puku mmadụ 50 puku pụrụ iche otu ụbọchị, ya na ozi 20, akụkọ mkparịta ụka dị n 'ụbọchị na 30 kwa ụbọchị. Nzube anyị bụ ime ka anyị 100 puku kwa ụbọchị ọbịa, saịtị ogo na mba banye Turkey mbụ na-agba ịnyịnya na saịtị.
Ahịa okporo ụzọ nke Turkey Ọsọ elu dị elu. Ụlọ ọrụ n'ichepụta ụlọ. Tụkwasị na ụgbọala, LRT na ụzọ ụgbọ ala, nke a na-akpọ "ụgbọ oloko mba". Anyị na-enwe obi ụtọ na ihe kwesịrị nsọpụrụ na ọnọdụ a.
Ozi ahia maka afọ 7. Web weebụ Rayhaber nwere ihe karịrị ozi 50.000, akụkọ nchịkọta ụbọchị niile na 20. Ebe 30.000 na ndepụta weebụ weebụ.
Aha: rayhab bụ
media: web / akwụkwọ akụkọ ebipụta
tọrọ ntọala: Nyocha 01.12.2011 / 01.01.2011 dị ndụ
News: Akụkọ 60.000, vidiyo 1700
ọbịa: 30.000 otu / ụbọchị
email: m iletisim@rayhaber.co
RayHaber.com ekwela nkwa ịgbaso Ụkpụrụ Iwu Ụlọ Ọrụ na ikike niile echekwara.
A na-ebipụta akwụkwọ akụkọ anyị dịka Iwu ahụ gbasara Nkà na ụzụ na nkà na-arụ ọrụ 5846. Mgbasaa akụkọ nke ụlọ ọrụ na ebipụta na gburugburu ebe ọ bụla chọrọ nkwenye ederede tupu nkwenye na-adabere na iwu nke ụlọ ọrụ dị iche iche. Ndị ọzọ na akụkọ ndị a na-ebipụta na RayHaber.com nwere ike republished, ọ bụrụhaala na ha na-ekwu na njikọ na peeji nke dị mkpa nke RayHaber.com. Ndị edere bụ maka ọrụ na isiokwu ndị e bipụtara na RayHaber.com.
Ozi N'uzu anyi
Ụlọ ọrụ anyị na-ebipụta ma na-aga n'ihu na-ebipụta akụkọ banyere ihe ndị ahụ na ndị mmadụ na-anọpụ iche ma naanị ihe ndị mere ndị na-agụ akwụkwọ ka a kọrọ. Ọ bụla omume ọ bụla mere bụghị ileghara ya anya na-achọ ịnapụta ịkọwa na-agụ akwụkwọ, 100% anyị na saịtị rayhaber.com bipụtara content Republic of Turkey, iwu a na-ebipụta na dị na bipụtara nile di iche iche nke ozi, si enwe nri ederede na ozi ọma nwebisiinka na-gwa site ewere n'ime dere ikike .
Maka Nkwekọrịta Iwu
RayHaber.com, saịtị anyị, iwu, iwu, nwebisiinka na ikike onwe onye ka akwadoro ịkwanyere onwe ya ùgwù. Ebe nrụọrụ anyị na-eje ozi dịka ned content tedir nke iwu 5651 kọwara. N'okpuru iwu dị mkpa, njikwa saịtị enweghị ọrụ ọ bụla ijikwa ọdịnaya iwu akwadoghị. N'ihi nke a, saịtị anyị ejirila 'ịdọ aka ná ntị na wepụ' ụkpụrụ. Ndị ejiri aka ha kwenyere na akụkọ nke ozi ọma ahụ na-akpata nsogbu n'ihi ozi ọ bụla na nke a na-agbaso iwu na-akwadoghị na iwu ezighị ezi nwere ike ịbịakwute anyị site na info@Rayhaber.com ma ọ bụ site na ịkpọtụrụ anyị. Mkpesa anyị na arịrịọ anyị ga-enyocha onye ọka iwu anyị, ma ọdịnaya a na-ewere dị ka mmebi ga-ewepu ozugbo na saịtị anyị.
Nzuzo / Nzuzo Nzuzo
© Copyright 2018 RayHaber.com Ikike niile echekwala. All nwebisiinka nke ụdị ọdịnaya ọ bụla, dị ka koodu, ozi, foto, ajụjụ ọnụ, na ihe ndị ọzọ, bụ RayHaber.com. A na-echekwa isiokwu niile, ihe onwunwe, foto, faịlụ dị mma, mmemme, vidiyo, ụkpụrụ na nhazi na RayHaber.com site na iwu nwebisiinka. Ha enweghị ike ị depụtaghachi, kesaa, gbanwee ma ọ bụ bipụtara n'ụdị ọ bụla na-enweghị ikike ederede RayHaber.com. Anaghị emepụta ma jiri ya mee ihe n'enweghị ikike.
Ngosipụta General, anyị ga-eji ozi gị dị na RayHaber.com. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ RayHaber.com na-eji ndị ọzọ iji hazie ozi gị. RayHaber.com chọrọ ka ndị ọzọ a na-eme ihe niile ị chọrọ. Mgbe ị na - emekọrịta na RayHaber.com Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbịaru oge, ị nwere ike debanye aha maka akwụkwọ akụkọ. Mgbe ị na-eji ọrụ RayHaber.com na intaneti, anyị na-eji adreesị IP. Ị nwere ike ịchọta anyị na ihe omume a.